नहरमा ठेकेदारको लापरबाही- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
२८ महिनामा २३ किमि शाखा नहर बनाउने जिम्मा लिए पनि पप्पु जेभीद्वारा १९ महिनामा जम्मा २ प्रतिशत काम
माघ २, २०७४ जनक नेपाल, कृष्णप्रसाद गौतम
नेपालगन्ज — बहुप्रतीक्षित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरमा पानी छाड्न सुरु गरिए पनि शाखा नहरको काम ठेकेदारको लापरबाहीले अलपत्र छ । डुडुवा शाखा नहर निर्माण निर्धारित समयभित्र नसकिने सम्भावना बढेपछि किसान चिन्तित छन् ।
कोस्टल/पप्पु जेभीले २० जुन २०१६ मा २८ महिनाभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी नहरको ठेक्का लिएको थियो । तर, १९ महिना बितिसक्दा जम्मा २ प्रतिशत काम सकिएको छ । ‘अर्को हिउँदसम्म खेतमा पानी पुर्‍याउने लक्ष्य हो तर समयमा काम नहुँदा लक्ष्य पूरा गर्न धेरै कठिन भइसकेको छ,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश कार्कीले भने, ‘ठेकेदारले विभिन्न निहुँ बनाएर काम सार्दै आएका छन् ।’ भएको कामसमेत मापदण्डविपरीत रहेको उनले बताए । कामको गति तीव्र बनाउन पटकपटक आग्रह गरिए पनि ठेकेदार पक्षले बेवास्ता गरेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘शाखा नहरको काम ढिलाइले मूल नहरमा पूरा पानी छाड्नसमेत सकिएन,’ कार्कीले भने, ‘यो अवधिमा ६० प्रतिशत काम पूरा हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म जम्मा २ प्रतिशत प्रगति छ । २३ दशमलव २ किमि लामो नहर कहिले पूरा हुने हो निश्चित छैन ।’ निर्माण कम्पनी कोस्टल/पप्पु जेभीले ढुंगागिट्टी, रूख कटान, इन्धन अभाव, विद्युतका पोल हटाउन समस्या भएकाले निर्माण सोचेजसरी अघि बढाउन नसकिएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले समयमै कठिनाइबारे जानकारी नगराउने तर आयोजनाले ताकेता गर्दा विभिन्न निहुँ देखाउने गरेको आयोजनाका प्राविधिक बताउँछन् । अहिलेसम्म नहरको डेढ किलोमिटरमा मात्र माटोको काम भएको छ । नहर १५ किलोमिटर खनिए पनि ‘सेफ साइड’ को मापदण्ड पूरा गरिएको छैन । ठेकेदारलाई डिजाइन स्टिमेटअनुसार काम गर्न भनिए पनि सुधार गर्न चासो नदेखाएको आयोजनाले जनायो । ‘एक त कामै कम भएको छ । भएको पनि डिजाइनअनुसार नहुँदा थप अन्योल भएको छ,’ सिनियर इन्जिनियर कार्कीले भने ।
डुडुवा शाखा बाँकेको १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनाका अनुसार यो सबैभन्दा ठूलो शाखा नहर हो । डुडुवा शाखाबाट कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मनिकापुर, हिरमिनिया, राँझा, डुडुवा गाउँपालिकाको कम्दी, बैजनाथ गाउँपालिकाको वनकट्टी, खजुरा गाउँपालिकाको मानपुर, इन्द्रपुरलगायत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना छ । नहर निर्माणका लागि ९८ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ ।
मूल नहरमा पानी छाडेपछि राहत
सिक्टाको मूल नहरबाट अहिले करिब तीन क्युमेक्स पानी सिँचाइका लागि छाडिएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसबाट पूर्वमा करिब पाँच सय र पश्चिममा पाँच सयदेखि एक हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ । सिक्टाले केही पानी छोडेपछि किसानलाई राहत मिलेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० मनिकापुरका बन्धुराम खटिकले बताए । ‘खडेरीले गहुँ सुक्ने चिन्ता भएका बेला सिक्टाले पानी छाडेपछि आसपासका किसानलाई राहत मिलेको छ,’ उनले भने । तर, केही किसानले भने जथाभावी पानी छाडिँदा गहुँबाली डुबानमा परेको जनाएका छन् ।
मानपुर, बेलहरी, कोहलपुर नगरपालिकाको गनापुरलगायत क्षेत्रमा पानी छाडिएको डिभिजन इन्जिनियर कार्कीको भनाइ छ । ‘यसले सुक्खा मौसममा किसानलाई राहत मिलेको छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी बगेको पानीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’
आयोजनाले मूल नहरबाट करिब २४ किमि दूरीमा पानी छोडेको छ । तर, डुडुवा शाखा नहर व्यवस्थित नभएकाले किसानलाई पर्याप्त पानी वितरण गर्न नसकिएको कार्कीले बताए । आयोजनाका अनुसार अगैया–कोहलपुर–एचगाउँ–जेठीनालासम्मको ४५ किलोमिटर पश्चिम मूल नहरको काम सकिएको छ । बाँधको सबै काम पनि पूरा भइसकेको छ ।
अगैया–बैजापुर–नरैनापुर–कटकुइयासम्मको साढे ५३ किलोमिटर नहरको काम भर्खरै सुरु गरिएको छ । करिब ४५ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा रूखैरूख पर्छन् । तिनमा टाँचा लगाई वन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिँदैछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि २८ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने उल्लेख गर्दै सिनियर डिभिजन इन्जिनियर अनुभव चौधरीले भने, ‘डिभिजनले निर्माण गरेको नहरलाई बॉध छेकेर सिक्टाको पानी ती क्षेत्रमा लैजाने योजना हो ।’
पश्चिमतर्फको सिंधिनिया शाखाको १९ दशमलव ६ किलोमिटर नहर निर्माणको काम करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ । उक्त नहर निर्माणपछि २ हजार १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुनेछ । यो शाखाको काम यसै आर्थिक वर्षभित्र सकिने चौधरीले बताए । ‘असारसम्ममा सिंधिनियाको २ हजार र डुडुवाको ५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ,’ उनले भने ।
कोहलपुर पश्चिम क्षेत्रका लागि अकलघरवा शाखाको ७ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्यस्तै पेडारी शाखा, प्रसेनीपुर, गुरुवागाउँ, टिटिहिरिया र थपुवा शाखाको डिजाइन निर्माण र टेन्डर प्रक्रिया भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:३४
माघ २, २०७४ मनोज पौडेल
तिलौराकोट (कपिलवस्तु) — विदेशी पुरातत्त्वविद्सहित नेपाली विज्ञको टोलीले बुद्धस्थल तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु) मा उत्खनन सुरु गरेको छ । बेलायतको डुह्राम युनिर्भसिटी, पुरातत्त्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्त्वविद् संलग्न टोलीले उत्खनन थालेको हो । तिलौराकोट प्रवेश गर्नासाथै प्राचीन सहर झल्को दिने गरी उत्खनन थालिएको छ ।
तिलौराकोटस्थित समयमाई मन्दिरदेखि उत्तर–पश्चिममा थालिएको उत्खनन ।
उत्खनन तिलौराकोटका ३ ठाउँमा गरिँदैछ । ३ वर्षअघि जियोफिजिक्स (भू–भौतिक सर्भे) सर्भे गर्दा मध्य क्षेत्रमा पाइएको १/१ मिटर लम्बाइ–चौडाइको प्रशासनिक भवन संरचनाका २ ठाउँमा काम थालिएको छ । उक्त संरचनाको पूर्वीद्वार क्षेत्रमा ३०/३० मिटर क्षेत्रमा १०/१० को ९ वटा ट्रेन्च बनाई काम सुरु गरिएको छ । त्यस्तै उक्त संरचनाको दक्षिणीद्वार क्षेत्रमा २०/२० मिटरको क्षेत्रमा १०/१० का ४ वटा ट्रेन्च बनाई काम अघि बढाइएको छ । प्रशासनीय संचनाको उत्तरी र पश्चिमी द्वार दुई वर्षअघि नै पत्ता लागिसकेको छ ।
त्यस्तै अर्को समयमाई मन्दिरदेखि उत्तर पश्चिममा १५ मिटर लम्बाइ र ६ मिटर चौडाइको ट्रेन्च बनाई उत्खनन थालिएको छ । पुरातत्त्वविद् डा. क्रिस्टोफर डेभिसले भने, ‘राम्रो नतिजा आउनेमा विश्वस्त छु ।’
तिलौराकोट उत्खनन अन्वेषण परियोजना सञ्चालन गर्न यस वर्ष लुम्बिनीस्थित कासाई होटलका अध्यक्ष नोबुओ कासाई टोक्सिनले सहयोग गरेका छन् । उनले २ करोड जापानी मुद्रा सहयोग गरेका छन् । पुरातत्त्व विभागका प्रमुख रामबहादुर कुँवरले भने, ‘यो वर्ष कासाईको सहयोगले काम थालिएको हो । जापान सरकारको जापानीय फन्ड इन ट्रस्टको सम्झौता प्रक्रियामा हुँदा समस्यामाथियौं’, उनले भने, ‘राम्रो कामका लागि सहयोग पाइहालियो ।’
सन् २०१३ देखि यहाँ उत्खनन, अन्वेषण भइरहेको छ । पहिलो वर्ष लुम्बिनी विकास कोष र त्यसपछि युनेस्कोको समन्वयमा जापानी फन्ड इन ट्रस्टको सहयोगमा उत्खनन भइरहेको छ । अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरेर पुरातात्त्विक सम्पदा सुरक्षित रहने गरी उत्खनन भइरहेको छ । उत्खननले तिलौराकोटको प्राचीन काल क्रम पत्ता लाग्दै गएको छ, डुह्राम विश्वविद्यालय बेलायतका सहउपकुलपति, प्रोफेसर तथा प्रमुख पुरातत्त्वविद् डा. रविन कनिङघमले भने, ‘भित्र प्रवेश गर्नासाथै प्राचीन सहरको व्यवस्थित र ऐतिहासिक रूपरंग देख्न सकिने बनाउँदै छौं ।’ युनेस्को कन्सल्ट्यान्ट तथा वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् कोषप्रसाद आचार्यका अनुसार
उत्खननले तिलौराकोटको ऐतिहासिकता पुष्टि गरेको छ ।
प्रकाशित : माघ २, २०७४ ०७:३३